Kulmiye oo mar kale doortay Muse Biixi - BBC News Somali
Kulmiye oo mar kale doortay Muse Biixi
Image caption Shirweynaha Kulmiye oo la soo gabagabeeyay
Shirweynihii labada maalmood uga socday Hargeysa xisbiga Kulmiye ee haya talada Somaliland ayaa maanta la soo gebogabeeyay iyadoo loo doortay guddoomiyaha Muuse Biixi Cabdi oo hore u ahaa guddoomiyaha .
Guddoomiye ku xigeenka kobaad waxaa loo doortay Maxamed Kaahin Axmed , ku xigeenka labaadna Maxamed Xaaji Yuusuf waabeeyo , ku xigeenka saddexaadna Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle , iyadoo ku xigeenka afraad loo doortay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Zeylici oo ah madaxweyne ku xigeenka Somaliland .
Xoghayaha guud waxaa loo doortay Xasan Saciid Yuusuf iyadoo Sahra Maxamed oo ah haweyneyda keliye ee tartanka ku jirtay shirka ka sheegtay inay u tanaasushay Xasan.
Tartan ma jirin oo waxaa muuqatay in dibedda lagu soo jilciyay cidda la dooranaayo.
Gacan taag ayaa ergooyin gaadhaya 1162 xubnood ugu codeeyeen si guud hoggaankan oo dhammaantood ah hoggaankii hore ee xisbiga Kulmiye .
Waxaa kaloo shirweynaha maanta lagu doortay cod gacan taag ah 300 oo ruux oo noqonaya golaha dhexe ee xisbiga oo iyagu dhowr bilood ka bacdi iska dhex dooran doona murashaxa madaxweynaha ee xisbiga Kulmiye ee doorashada badhtamaha sanadka 2015 .
Guddoomiyaha cusub ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeediyay madasha ayaa sheegay inay ballanqaadayaan hoggaankoodu inay dhawraan walaalnimada, wadajirka, gooni isu taagga Somaaliland iyo destuurkeeda .
Sidoo kale waxaa ka hadlay shirweynaha madaxweyne xigeenka Somaliland Zeylici iyo wasiirka maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ugu baaqay ergooyinka xisbiga in gacamaha is qabsadaan mar haddii tartankii dhammaaday .
Shilalka gaadiidka Somalilan oo batay
Madaxa doorashada Somaliland oo iscasilay
Shirweynaha KULMIYE oo dib loo dhigay
21 Jannaayo 2014